Psalmen 129 HTB - Nnwom 129 ASCB
1“Wɔahyɛ me so pii firi me mmɔfraase,
2“Wɔahyɛ me so pii firi me mmɔfraase,
nanso wɔntumi nnii me so nkonim.
3Fentemfoɔ afentem mʼakyi
ayɛ wɔn nkofie atentene.
4Nanso Awurade yɛ ɔteneneeni;
Watwitwa amumuyɛfoɔ nhoma afiri me ho.”
mfa animguaseɛ nsane wɔn akyi.
6Ma wɔnyɛ sɛ ɛserɛ a ɛwɔ ɔdan atifi,
ɛnnyini na ahye;
7Ɛremma otwafoɔ nya biribi wɔ ne nsam,
na deɛ ɔboaboa ano nso renya hwee nʼabasa so.
8Mma wɔn a wɔtwam hɔ nnka sɛ,
yɛhyira mo wɔ Awurade din mu.”
ASCB : Nnwom 129